Ao amin'ny famokarana capsules, fiovaovan'ny ny capsule vato mitranga matetika eo ambany ny fitiavana ny olombelona, ​​milina, fitaovana, ny fomba sy ny tontolo iainana. Capsules sasany dia avy ny isan-karazany maneho ny mety eo amin'ny kalitao avo, izay tokony ho hita ho toy ny "vokatra mampidi-doza". Ahoana no hiatrehana maro vokatra mampidi-doza foana ny aretin'andoha ho an'ny fanaraha-maso ny kalitao sampan-draharaha sy ny sampan-draharahan'ny famokarana.
Mandritra izany fotoana izany, ny miasa CMC fahombiazana ny andian-dahatsoratra dia afaka hitombo lavitra sy ny fomba famoronana asa - "extendable tarika rafitra" sy ny "manam-petra mifanitsy fifandraisana". Noho izany, dia azo tafiditra akory capsule milina mameno ny mandanja capsule rehetra avy amin'ny famokarana.
Azo ampiharina Capsule Size
Manaraka: Foana Capsule Sorter
marina Capsule Fanombanana
Capsule manavaka Machine
Capsule Fanombanana Machine
Capsule Weight Nijery Machine
High fametrahana mazava Capsule Checkweigher
Industry-mitondra an'i Capsule Checkweigher
mitondra zava-baovao Checkweigher
fanafody Capsule Fitaovana
fanafody Capsule Machine